न्यूजिल्याण्ड नेपाल सोसाईटीले मनायो रजत जयन्ती ! २५ वर्षदेखि क्रियाशील संस्थाको कथा « MNTVONLINE.COM
न्यूजिल्याण्ड नेपाल सोसाईटीले मनायो रजत जयन्ती ! २५ वर्षदेखि क्रियाशील संस्थाको कथा
न्युजिल्याण्ड नेपाल सोसाइटीले अकल्याण्डमा आफ्नो स्थापनाको २५ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । तत्कालीन समयमा जोग प्रसाद लिम्बूको अध्यक्षता र सर एडमन्ड हिलारीको संरक्षणमा सन् १९९५ जुलाई २५ मा स्थापित सोसाईटी न्युजिल्याण्डको सबैभन्दा पुरानो नेपाली क्रियाशील संस्था हो । तत्कालीन संस्थापक अध्यक्ष लिम्बु यतिबेला अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा बसोबास गर्नुहुन्छ ।
कार्यक्रमका मुख्य अतिथि अकल्याण्डका मेयर फिल गोफले रजत महोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उहाँले न्युजिल्याण्डमा नेपाली संस्कृति र भाषालाई जीवन्त राख्न गरेको प्रयासको सराहना गर्नुभयो। तेञ्जिङ र एडमण्डले सगरमाथा आरोहण गरेकाले मात्रै भन्दा पनि त्यस पश्चात् एडमण्डले नेपाल र नेपालीसँग कायम राखेको निकटताले नेपाल र नेपालीबीच पृथक एवं आत्मीय सम्बन्ध रहेको बताउनु भयो ।
सोसाइटीको रजत जयन्ती समारोहमा अन्य अतिथिहरु न्युजिल्याण्डका सासंदहरु मेलिसा ली, प्रियांका राधाकृष्णन, डा. परमजीत परमार तथा नेपालका लागि कन्सुलर पिटर गिब्सले आफ्नो शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको थियो । उहाँहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई निरन्तर प्रगाढ बनाउन तथा न्युजिल्यान्डको संस्कृतिक विविधतामा नेपालको पनि उल्लेख्य स्थान रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरुले पहिलो पटक अकल्याण्डमा नेपाल फेष्टिभल आयोजना गर्ने, कोरोनाको महामारीका बेला नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सहयोग लगायतका कामको प्रशंसा गरेका थिए । गतवर्ष तत्कालीन अध्यक्ष दिनेश खड्काको संयोजकत्वमा स्थानीय एओटा स्क्वायर,अकल्याण्डमा नेपाल फेष्टिभल गरिएको थियो । कोरोना महामारीको बेला संस्थाले विद्यार्थीलाई ८ सय खानाको बक्सहरु वितरण गरेको थियो ।
सर एडमन्ड हिलारी पश्चात सोसाइटीको संरक्षकको भूमिकामा रहनुभएकी लेडी जून हिलारीले न्युजिल्याण्डमा नेपाली समुदायलाई अभिभावकत्व प्रदान गरेकोमा विशेष सम्मान गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि फिल गोफ, संरक्षक जुन हिलारी तथा संस्थाका अध्यक्ष डा. सन्तोष भण्डारीले पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष डा. भण्डारीले सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई स्वागत गर्नु भएको थियो भने मुना ढकालले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो । नव निर्वाचित कार्यकारी समितिको यो पहिलो कार्यक्रममा १५० भन्दा धेरै नेपालीहरुको सहभागिता रहेको संस्थाका सचिव डा. सञ्जय मरासिनीले बताउनुभयो ।
– सञ्जय शान्ति सुवेदीको सहयोगमा